အလုပ် မြန်မာ - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ဆိုင်အရောင်းစာရေး အလုပ်အကိုင်များ
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ကွန်ပျူတာ 3
လက်ဝတ်ရတနာနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်း 3
ဆေးဝါးနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ 7
အလုပ် 79 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
Sales Representative (Yangon/Mandalay)
ရှိပြီးသား နှင့် အလားအလာရှိသော customers များအား ရောင်းကုန် ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှု များ မိတ်ဆက် ရောင်းရန် Customer များ၏ လိုအပ်ချက်များ၊ cost-benefit analysis များ ပြုလုပ်ရမည် Customer များနှင့် ကောင်းမွန်သာ ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ရန် နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် အဆက်အသွယ်ရှိနေစေရန် ဆောင်ရွက်ရမည် Sales targets များပြည့်မီရန်ဆောင်ရွက်ရန် Coordinate sales effort with team members and other departments -
အကျိုးအမြတ်: ဖယ္ရီ ယူနီေဖာင္း
Recruiter active 23 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
Sales & Marketing (အရောင်းမြှင့်တင်ရေး နှင့် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး, Sales Target ပြည့်မှီရမည်။ Online & မြေပြင် စက်ပစ္စည်း မိတ်ဆက်ပွဲများ ပါဝင်ရမည်။) Product Layout Control ( Show Room ကုန်ပစ္စည်းခင်းကျင်းပြသခြင်း၊ Zone စာရင်းကောက်ခြင်း ) Customer Services, (Promote, ဈေးဝယ်လိုအပ်ချက်အား Recommend & Problem Solving) Installing & Fitting Machine （စက်ပစ္စည်းများအား စမ်းသပ်ခြင်း၊ တွဲပေးခြင်းနှင့် အာမခံ၊ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ မှာကြားခြင်း） Packaging & Checking (ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်ပိုးပေးခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ ဈေးဝယ်ယာဉ်အရောက် ပစ္စည်းပို့ဆောင်ပေးခြင်း) Report (နေ့စဉ် အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်း)
အကျိုးအမြတ်: ၁*-ဘောနပ်စ်+ ကော်မရှင် ရာထူး Level တက်လျှင် ပါဝင်မည်။ ၂*-ခရီးထွက်လျှင် ခရီးစရိတ်ရမည်။ ၃*-နေ့လည်စာ တနပ် အခမဲ့ သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။ ၄*-အဆောင် ferry ရ
Sale & Marketing Staff (Female)
- Customer visitသွားခြင်း၊ Customer များနှင့်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်အောင်တည်ဆောက်ခြင်း၊ Product Catalog နှင့် အချက်အလက်များကို စုဆောင်းဖန်တီးခြင်းများပြုလုပ်ရမည်။ - Event, Sale, Quotation, Invoiceများ၊ Sale Inquiry, Order များဆောင်ရွက်ရမည်။ - Sale Target ဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ - Daily Activity Report ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ - တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိ၍ printing industryကို စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: *Transportation Allowance(သို့)Ferry ပေးမည်။ *ရက်မှန်ကြေး ပေးမည်။ *Uniform ပေးမည်။
တင်သောနေ့: 23 Nov 2021
Preparing and Data Entry Quotations (Price, Specification, Documents, etc.) Dealing with Customers and Suppliers Perform Day-to-Day Operations as assigned Learn from Executive to understand Product Catalog, follow Guideline. Assist the Seniors and Manager Data Entry and Documentation (Preparing Office Letters, Filling, Scanning/Photo Copying, and document registration)
အကျိုးအမြတ်: ဘောနပ်စ်များ အချိန်ပိုကြေး စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ဆုလာဘ်များ
client များဆက်သွယ်ခြင်း။ sale target များပြည့်မီခြင်း (သို့) ကျော်လွန်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ အလားအလာလက်ကား၊ လက်ကားရောင်းချသူ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများနှင့်ဆေးခန်းများညှိနှိုင်းနေသည်။ ကိုးကားချက်များ၊ ပရိုမိုးရှင်းများနှင့်ညှိနှိုင်းမှုများအတွက်စျေးနှုန်းအချိန်ဇယားများကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်ကူညီပေးခြင်း။ အပတ်စဉ်နှင့်လစဉ်အရောင်းအစီရင်ခံစာများပြင်ဆင်ခြင်း။ အလားအလာရှိသော ဖောက်သည်များထံ အရောင်းတင်ပြချက်များ ပေးခြင်း။ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ်များနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။ ကုမ္ပဏီပရိုဂရမ်များကို နားလည်ခြင်းနှင့် မြှင့်တင်ခြင်း။ ဖောက်သည်များထံမှအပ်ငွေများနှင့် ငွေပေးချေမှုလက်ကျန်များကို ရယူခြင်း။ အော်ဒါများအတွက် အရောင်းစာချုပ်များ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တင်သွင်းခြင်း။ လိုအပ်ချက်များကို အကဲဖြတ်ရန် သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်များကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ဖောက်သည်များနှင့် အလားအလာရှိသော ဖောက်သည်များကို သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်း။ ဖောက်သည်မှတ်တမ်းများကို ထိန်းသိမ်းခြင်း။ အကြွေး ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ထုတ်ကုန်များ၊ စျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုအကြောင်းဖောက်သည်များ၏မေးခွန်းများကိုဖြေကြားခြင်း။
အကျိုးအမြတ်: Over time ကြေးရှိသည်။ Performance ပေါ်မူတည်၍ဆုကြေးရှိမည်။
စကားပြောယဥ်ကျေးချိုသာ၍ သွက်လတ်ချက်ချာသူ ကွန်ပျူတာအခြေခံအသုံးပြုနိူင်သူ/ မသုံးနိူင်သော်လည်း သင်ယူလိုစိတ်အပြည့်ရှိသူ ရေရှည်လက်တွဲလုပ်နိူင်ပြီး အရောင်းပိုင်းတွင် အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်အပြည့်ရှိသူ ဆိုင်ခွဲများတွင် အလှည့်ကျတာဝန်ထမ်းဆောင်နိူင်သူ
Live Sales Girl
Kim Beauty & Fashion House
- သွက်သွက်လက်လက်နှင့် ဈေးရောင်းတတ်သူ ဖြစ်ရမည် - Fashionပိုင်း , Cosmestic ပိုင်း အတွေ့အကြုံရှိရမည်။ - Live လွှင့်ပြီး အရောင်းအတွေ့အကြုံရှိဖူးသူ ဖြစ်ရမည်။ - အရောင်းကိစ္စရပ်များအား တက်ကြွစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ - ရုံးမှ သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းများအား လိုက်နာနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ - Sale Target ပြည့်မှီအောင် ရောင်းချနိုင်ရမည်။
Sales Representative (Mawgyun)
Thiha Wholesale & Distribution
မော်လမြိုင်ကျွန်း | ဧရာဝတီတိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း
အသက္ ၁၈ႏွစ္ မွ ၂၅ ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္ ေက်ာင္းကိစၥ ကင္းရွင္းသူျဖစ္ရမည္ ဧရာ၀တီတိုင္း (ေမာ္ကၽြန္း) တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္
-Sale Target ပြည့်မှီအောင်ရောင်းချရမည်။ -ကုန်ပစ္စည်းများ၏အသုံးပြုပုံအဆင့်ဆင့်ကိုသေချာနားလည်၍ အလေအလွင့်နည်းပါးအောင် ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ရမည်။ -ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် အခြားသောကုန်ပစ္စည်းများကြား ခြားနားချက်များကို သေချာစွာခွဲခြားနိုင်ရမည်။ -ကောင်တာအတွင်းလိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများ Order ကောက်ခြင်းနှင့် စာရင်းအလိုအပိုများရှိလျှင် တာဝန်ယူဖြေရှင်းရမည်။ -Customer Complain များဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။ -လက်အောက်ရှိဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှန်/မမှန်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် လိုအပ်သည်များ လမ်းညွှန်သင်ကြားပေးရမည်။
-Customerများဆီသို့ လိုအပ်သလို ဆက်သွယ်ခြင်း၊ visit သွားခြင်းများပြုလုပ်ရမည်။ -Sale Forecastများကို လိုအပ်သလိုပြင်ဆင်၍ သတ်မှတ်ထားသောTargetများပြည့်မှီအောင်ကြိုးစားရမည်။ -Client များ၏စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန်ဆောင်ရွက်၍ follow up လိုက်ခြင်း၊ ရေရှည်ဆက်ဆံရေးတိုးတက်စေရန် သင့်လျှော်သည့် နည်းဗျူဟာ နှင့် လုပ်ဆောင်ရမည်တို့ကို ချမှတ် လုပ်ဆောင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။ -Technical Product Knowledge များကို သိသာထင်ရှားစွာ ရှာဖွေ၍customerများအားရှင်းပြနိုင်ရမည်။ -Carry out regular production demonstrations in conjunction with company directives. -Work with all stockholders including aftersales service & original equipment manufacturers (OEM’s) to provide smooth and seamless information and work flow to achieve efficient and effective management. -Provideaprofessional and appropriate solution to Customer to grow the Sales Business in parallel. -Learn and Seek financial Services team/Company to provide solutions to customers that require these services. -(HP Sales)Actively striving for best practices in customer satisfaction. -Regularly maintaining “CRM” and other company management systems as required by your direct report manager and company policy. -Sales of Power Equipment in line with the company policy. -(Update the CRM regularly)Prepare the Weekly Customer Visit, Quotations & Sales Reporting including update competitors stock and pricing to management.Extensive traveling throughout the assigned territory. -To keep confidential all company information including though not limited to: costing, data bases, expenses, OEM’s, employee and all other information.
အကျိုးအမြတ်: - commission -Yearly bonus -Yearly Increment
Pump Man Leader - Male (2)
မြစ်ကြီးနား | ကချင်ပြည်နယ် ကချင်ပြည်နယ်
- ဆိုင်အိပ်ဆိုင်စား စရိတ်ငြိမ်းနေထိုင်နိုင်သူျဖစ္ရမည္ - ဆီဖြည့်ဝန်ထမ်းများအား အနီးကပ်ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည္ - သုံးစွဲသူများအား ကောင်းမွန်သည့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် ကြီးကြပ်ပေးနိုင်ရမည္
မြောင်းမြ | ဧရာဝတီတိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း
အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၂၅ ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္ ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ ျမိဳ႕တြင္းသြားလာႏိုင္သူျဖစ္ရမည္ အိမ္ေထာင္မရွိသူ (အပ်ိဳ) ျဖစ္ရမည္ ဧရာ၀တီတိုင္း (ေျမာင္းျမ) ျမိဳ႕တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္
ဆိုင်ခွဲများတွင် အလှည့်ကျတာဝန်ထမ်းဆောင်နိူင်သူ စကားပြောယဥ်ကျေးချိုသာ၍ သွက်လတ်ချက်ချာသူ ကွန်ပျူတာအခြေခံအသုံးပြုနိူင်၍ ခေါင်းဆောင်လိုစိတ်ရှိသူ ရေရှည်လက်တွဲလုပ်နိူင်ပြီး အရောင်းပိုင်းတွင် အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်အပြည့်ရှိသူ
-Customer များအားယဉ်ကျေးချိုသာစွာဆက်ဆံရမည်။ -ကုန်ပစ္စည်းများအကြောင်းသိရှိနားလည်ပြီး ဝယ်သူများအားသေချာရှင်းပြနိုင်ရမည်။ -ကုန်ပစ္စည်းများ၏ စာရင်းပိုင်းတိကျသေချာစွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။ -အရောင်းမြှင့်တင်ရေးပစ္စည်းများကို ကျကျနန ဂရုတစိုက်ဖြင့် ခင်းကျင်းပြသရမည်။ -Customer Complain များဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။
Su Latt Pharmacy
- Sales Target ပြည့်မှီကျော်လွန်အောင် ကြိုးစားရောင်းနိုင်သူဖြစ်ပြီး အရောင်းဆိုင် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂)နှစ် အထက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ - လိုအပ်ပါက ဆိုင်ခွဲများသို့ သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ - တာမွေ ရန်ကင်း ဗဟန်း တောင်ဥက္ကလာပ နှင့် နီးစပ်သူများလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
အကျိုးအမြတ်: Uniform Awords
Sales Representative (Hlaing Thar Yar)
• ထိရောက်သော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ဆက်သွယ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများကို စီစဉ်ခြင်း၊အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုစွမ်းရည်ရှိရမည် • ကုမ္ပဏီမူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားလုံးကို လိုက်နာနိုင်မှုစွမ်းရည်ရှိရမည် • Client မ်ားႏွင့္ Sales Appoinment မ်ား ျပဳလုပ္ျပီ အထက္အရာရွိသုိ႕ ျပန္လည္တင္ျပရမည္ • Cusomter Record မ်ားကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။ • Product ႏွင့္ပက္သက္၍ Customer မ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈရွိ/မရွိ အျမဲတေစ ေလ့လာေမးျမန္းရမည္ • Target Market အသစ္မ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ရမည့္ အျပင္ ေရာင္းအားတက္လာေစရန္ Market Penetration မ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည္ • ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းပေါ်အခြေခံ၍ စားသုံးသူများနှစ်သက်ႏိုင္မည့္ထုတ်ကုန်များကို မည်သို့ဖန်တီးရမည်ကို နားလည်နိုင်ရမည်။ • ျပည္တြင္းရွိ Market Trend အားအစဥ္ဆက္ မျပတ္ေလ့လာႏိုင္ရမည္ • ထုတ်ကုန်များကို ဖောက်သည်များအတွက် ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေရန် နည်းလမ်းအသစ်များကို အမြဲရှာဖွေနိုင်ရမည်။
Recruiter active2mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
*****OG ႏွင့္ child အေတြ႕အၾကဳံ ရွိရမည္။**** *ေဆး႐ုံ ေဆးခန္း ရဲရဲဝင့္ဝင့္ ဝင္ရဲသူကို ဦးစားေပးမည္။ ဆက္ဆံ ေရး ေကာင္းမြန္ရမည္။ *လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကဳံ ႏွင့္ interview ေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး လစာ ညႇိုႏွိုင္းနိုင္သည္။ ျဖည့္စြပ္အာဟာရ Vitamin Supplements မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေတြ႕အၾကဳံ ရွိသူကို ဦးစားေပးမည္
အကျိုးအမြတ်: ကော်မရှင် ခရီးသွားစရိတ်၊ နှစ်အလိုက် ဘောနပ်စ်နှင့် တိုးမြှင့်ခြင်း။
စတိုးဆိုင်နှင့် ဖုန်းရှိ တောင်းဆိုမှုများတွင် ဝယ်ယူသူများကို ကူညီပေးရန္။ အရောင်းနှင့် မားကတ်တင်းလှုပ်ရှားမှုများအတွက် သက်ကြီးရွယ်အိုများထံမှ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရန္။ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အပတ်စဉ် ဖောက်သည်များသည် စာအုပ်ဆိုင်သို့ လာရောက်ရောင်းရန္။ စာအုပ်အရောင်းဆိုင်များ၏ လိုအပ်သလို သိုလှောင်မှုအဆင့်များနှင့် သိုလှောင်စင်များကို စောင့်ကြည့်ရန္။ လက်ရှိထုတ်ကုန်များနှင့် ပရိုမိုးရှင်းများအကြောင်း ဖောက်သည်များအား အသိပညာပေးရန္။
-Customer များအားယဉ်ကျေးချိုသာစွာဆက်ဆံရမည်။ -စင်ပေါ်တွင် ပစ္စည်းများ ပြတ်လပ်မှု မဖြစ်ပေါ်အောင် အမြဲဖြည့်တင်းရန်နှင့် ပစ္စည်းများ အမြဲ သန့်ရှင်း သပ်ရပ်ရမည်။ -အရောင်းမြှင့်တင်ရေးပစ္စည်းများကို ကျကျနန ဂရုတစိုက်ဖြင့် ခင်းကျင်းပြသရမည်။ -Customer များထံဖုန်းဆက် Order မေးရမည်။ -ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သတ်၍ ဝယ်သူများအားသေချာရှင်းပြနိုင်ရမည်။
Sale & Operator
- လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂) နှစ်ရှိသူ။ - Customer complaint များအား ကောင်းမွန်စွာ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနိူင်သူဖြစ်ရမည်. - အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး စကားပြောချိုသာယဉ်ကျေးသူ
Actively participate in showroom hospitality to ensure customer satisfaction Assist in all showroom events Assist in processing orders, quotations Enquiry product price from Suppliers Dealing with Customers and Suppliers Perform Day-to-Day Operations as assigned Learn from Executive to understand Product Catalog, follow Guideline. Assist the Seniors and Manager
ဆေးဝါးအ ရောင်းဝန်ထမ်း (NPT)
1 . ဆေးရုံ နှင့်ဆေးခန်း များအားဝင်ထွက်သွားလာနိုင်မည်။ 2. ဆရာဝန်များနှင့်တွေ့ဆုံပြီး မိမိတို့၏ productများအားရှင်းလင်းပြခြင်း 3. အရောင်းအော်ဒါကောက်ခံခြင်း 4. Customer အသစ်များရှာဖွေခြင်း
- ဆေးဆိုင်တွင် ဆေးပစ္စည်းများရောင်းရန် ။ - လူမှုဆက်ဆံရေးပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။ - အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်၍အများနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - Customer Service ကောင်းမွန်၍သွက်သွက်လက်လက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
ဘဏ်ခွဲလုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုများ (အရောင်း၊ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု၊ စီစဉ်မှု၊ ပို့ဆောင်မှု၊ စတော့ထိန်းချုပ်မှု၊ ထောက်ပံ့မှုနှင့် ဝယ်လိုအားစီစဉ်မှု) စသည်တို့၏ နေ့စဥ်လုပ်ဆောင်မှုအတွက် တာဝန်ယူပါသည်။ ဖောက်သည်၏တိုင်ကြားချက်ကို ရှင်းလင်းစေပြီး ပြဿနာ၏အကြောင်းရင်းကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြင့် ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးသည်။ သုတေသနပြုလုပ်ပြီး အလားအလာရှိသော ဖောက်သည်အသစ်များနှင့် စျေးကွက်အခွင့်အလမ်းသစ်များကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပါ။ ပြိုင်ဖက်ထုတ်ကုန်များ၊ အရောင်းနှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများကို စောင့်ကြည့်ပါ။ ဘဏ်လုပ်ငန်း အထွေထွေတာဝန်ခံ။ ဘဏ်ခွဲမန်နေဂျာထံ လစဉ်အစီရင်ခံပါ။
အကျိုးအမြတ်: Uniform + Ferry provide
Empire Holding Co.,Ltd (TEKA Myanmar)
အလုံ | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
စာရင်းသွင်းတက်ရမည်။ သွက်လပ်ပြီးအရောင်းကိုစိတ်ဝင်စားရမည်။ အဖွဲ့အစည်းနှင့်လုပ်ကိုင်တက်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: လစာ + အချိန်မှန်ကြေး+ရက်မှန်ကြေး+ commission
ဆီဖြည့်ဝန်ထမ်း (Filling Attendant)
 Customer အားယဉ်ကျေးပျူငှာစွာဖြင့် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးရမည် ။  Customer ဝယ်ယူသည့်ဆီအမျိုးအစားအား တိကျမှန်ကန်စွာဖြင့် ဂရုတစိုက်ဝန်ဆောင်မှု ပေးရမည် ။  သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းဝတ်ဆင်ရန်သတ်မှတ်ထားသော Safety Shoes, Uniform , င့် PPE Products များအား သန့်ရှင်းစွာဝတ်ဆင်သုံးစွဲရမည် ။  တာဝန်ကျရာ Shift အလိုက် သက်ဆိုင်ရာ Shift Leader (အဆိုင်းခေါင်းဆောင်) င့် တာဝန်ခံ ၏လမ်းညွှန်မှု ၊ တာဝန်ပေးအပ်မှုအတိုင်းလိုက်နာရမည် ။  Company မှချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည် ။
အကျိုးအမြတ်: - OT Allowance - Lunch/Dinner
တာယာ Service Center တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အရောင်းအဝယ်ကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ car fittings ပိုင်းနားလည်တက်ကျွမ်း၍ မိမိအဖွဲ့အား ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: အချိန်ပိုကြေး ရက်မှန်ကြေး လူမှုဖူလုံရေးကြေးဆောင်ပေးခြင်း
Mambership Consultant (Sales)
- အရောင်းပိုင်းနှင့်အညီ Monthly Target ရှိပြီးမိမိ၏Target ကို ပြည့်မီအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ -Target နှင့် ပတ်သက် ရရှိလာမည့် pressure ကို နားလည်ရမည်။ - လူအများနှင့် စကားပြောဆိုရခြင်းကို နှစ်သက်သူpeople person ဖြစ်ရပါမည်။ - သင်ယူလိုစိတ်ရှိရမည်။ - သွက်လက်တက်ကြွပြီး ကြိုးစားလိုစိတ်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။ - လစဉ် commission အမြောက်အမြားပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန် မိမိ၏ နားရက် အားလပ်ချိန်တို့ကိုပါ အလုပ်အတွက်အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါက အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။